ရန်ကုန်ကြည့်မြင်တိုင် သပိတ် ကားနှင့်တိုက် ဖြိုခွဲခံရသဖြင့် အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦး သေဆုံးနိုင်ခြေရှိပြီး ၅ ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံရ - Myanmar Pressphoto Agency
ရန်ကုန်ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ၅ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူငယ်များ၏ ပြောက်ကျား သပိတ်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကားဖြင့် အရှိန်ပြင်းစွာတိုက်ပြီး ဖြိုခွဲခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စပ်တပ်သုံး Double Cab ကားဖြင့် အရှိန်ပြင်းစွာ တိုက်ဖမ်းခဲ့သည့်အပြင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆန္ဒပြလူငယ်အချို့ အသက်ဆုံးပါးနိုင်သည်အထိ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြမှုတွင်ပါဝင်သော MPA ၏ သတင်းရင်းမြစ်များကို အတည်ပြု မေးမြန်းချက်အရ ဆန္ဒပြလူငယ် ၅ ဦး ထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့်အပြင် အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးမှာ ယာဉ်ဖြင့်ဝင်တိုက်ခဲ့သဖြင့် ပြင်းထန်ဒဏ်ရာဖြင့် ရရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြသည့် ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးက “သေတယ်မသေဘူး ဆိုတာထက်လေ။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်က ကားနဲ့တိုက်မိပြီး လွင့်ထွက်သွားတယ်။ လုံးဝမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကို လူနာတင်ကားနဲ့သယ်သွားတယ်” ဟု ဆိုသည်။
“သပိတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ စစ်တပ်က ကားနဲ့ သပိတ်ကိုတိုက်ပြီး ဖမ်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြေးကြ ရတာပေါ့။ ကားနဲ့တိုက်ခံရတာဆိုတော့ ထိသွားတဲ့သူတွေ လည်းရှိပါတယ်” ဟု ဆန္ဒပြသပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်အပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် ရုပ်သံဖိုင်များအရ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က စစ်တပ်သုံး Double Cab ဖြင့် ဆန္ဒပြလူငယ်များကို အရှိန်ပြင်းစွာ ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သံများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၁၀ လကျော်လာချိန်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက နိုင်ငံအနှံ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ နေသူများကိုပင် အညှာတာကင်းမဲ့စွာ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်တိုက် တွေ့မြင်လာရသည်။
#ရန်ကုန်ကြည့်မြင်တိုင်သပိတ် #ကားနှင့်တိုက်ဖြိုခွဲခံရသဖြင့် #အချို့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရ #၅ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံရ #MPA
Yangon Kyimyindaing Strike Run over by Car and Two Women Likely Killed and at Least Five Arrested
A youth guerilla strike in Yangon’s Kyimyingdaing township held on December5morning was run over by the terrorist military car atahigh speed.
The terrorist military hit the crowd atahigh speed with double cab type of military car; plus, they also fired shots in the process and some young protesters were injured and arrested with potentially fatal wounds.
According to confirmation of the sources from the protest to MPA, at least five youth protesters were arrested and two young women were hit by the car; they were seriously injured and are likely to die.
One who involved in the protest said, “Rather than die or not. Two girls were hit by the car and blown away. They were not moving. They were carried away in an ambulance”.
“The military swept the strike with cars and carried out arrests. So they ran. There were those who were hurt in the run-over by the car”, saidawomen who involved in the protest.
According to footages emerging following the incident, the terrorist military runs over the youth protesters usingadouble cab military car atahigh speed and there were gunshots also.
After over 10 months of military coup, it has been witnessed that the terrorist military is continuously trying to cruelly shoot and kill peaceful protesters across the country, not only in Yangon city.
#YangonKyimyingdaingStrike #RunOverbyCar #SomeSeriouslyWounded #AtleastFiveArrested #MPA
Tags: arrested MPA Myanmar News protest Yangon
Previous: NLD နာယက ဦးတင်ဦး နှင့် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ခင်ညွန့်ကို မင်းအောင်လှိုင် တွေ့ဆုံ
Next: ကလေးမြို့အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးများ ဆောင်ရွက်ရန် ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း